Jailbreak ဖြင့် iPhone ပေါ်တွင်သင်၏ PS3 (သို့) PS4 ထိန်းချုပ်မှုများကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ငါက Mac ကပါ
Jailbreak ဖြင့် iPhone ပေါ်တွင်သင်၏ PS3 သို့မဟုတ် PS4 ၏ Controllers များအသုံးပြုနည်း
အသုံးချ | | ပစ္စည်းများ, လဲ tutorial
ဒီကနေ့ အသုံးချ သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်သင်၏ PS3 သို့မဟုတ် PS4ထိန်းချုပ်မှုကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုသင့်အားပြောပြပါမည် jailbreak။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းအလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၌သင့်အားစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမည့်အချိန်လေးများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။
1 Jailbreak ဖြင့်သင်၏ PS3 သို့မဟုတ် PS4 ၏ Controller ကိုသုံးနိုင်သည်
1.1 သင်၏ Controller ကို Mac မှပြုပြင်ပါ
1.2 သင့်ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားကို Windows မှပြင်ဆင်ပါ
Jailbreak ဖြင့်သင်၏ PS3 သို့မဟုတ် PS4 ၏ Controller ကိုသုံးနိုင်သည်
စတင်ခြင်းမပြုမီသင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်သင်၏ PS3 သို့မဟုတ် PS4ထိန်းချုပ်မှုများကိုသင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်ယခင်ကလုပ်ဆောင်ပြီးမှသာဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည် jailbreak ဒါဆိုမလုပ်ရင်သင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသင်ယူနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
ပထမဆုံးပြောသင့်သည်မှာ Cydia မှ download နှင့် install လုပ်ရန်ဖြစ်သည် tweaks ကိုခေါ် အားလုံးတို့အတွက် Controller; ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် ModMyi.com repo တွင်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ပြုလုပ်သောအခါပုံမှန်အားဖြင့်ရောက်ရှိသည် jailbreak$ 1,99 သည်။
မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ် အားလုံးတို့အတွက် Controller ကပင် setup ကို configuration ကိုမပါဝင်ပါဘူး။ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်အသိပေးချက်များကိုသက်ဝင်စေခြင်း / ပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီနေရာကဒုတိယအဆင့်ကိုသွားမယ်၊ ငါတို့ကွန်ပျူတာက Windows လား၊ ပီစီလားဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့စကြရအောင်။
သင်၏ Controller ကို Mac မှပြုပြင်ပါ
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ Mac အတွက် Sixaxis Pair Tool.
သင်၏ Controller နှင့် iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod Touch တို့ကိုသင်၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့ ်၍ နှိပ်ပါ iPhone သို့မဟုတ် iPad အတွက် Pair Controller, သင့်မှာရှိသည့်စက်ပေါ်မူတည်သည်။
သင့်ရဲ့ Controller နဲ့ Device ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
လိမ္မာပါးနပ်။ ဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်ဖွင့်သောအခါ၊ Controller ကိုဆက်သွယ်ရန်သတိပေးစာပေါ်လာလိမ့်မည်။ "PS" ကို နှိပ်၍ ပျော်မွေ့ပါ။
သင့်ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားကို Windows မှပြင်ဆင်ပါ
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ Windows အတွက် Sixaxis Pair Tool ကို.
သင့်ရဲ့ Controller နဲ့ iPhone, iPad or iPod Touch ကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ USB မှတဆင့်
ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့ ်၍ သင်၏ iOS စက်၏ Bluetooth လိပ်စာကိုရေးပါ၊ သင် Settings> General → Information တွင်တွေ့နိုင်သည်
ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Update ကို။
လိမ္မာပါးနပ်။ အရင်ဂိမ်းကဲ့သို့ဖွင့်သောအခါ၊ Controller ကိုဆက်သွယ်ရန်သတိပေးချက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ "PS" ကို နှိပ်၍ ပျော်မွေ့ပါ။
ရင်းမြစ် မင်းရဲ့ Apple World
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » Jailbreak ဖြင့် iPhone ပေါ်တွင်သင်၏ PS3 သို့မဟုတ် PS4 ၏ Controllers များအသုံးပြုနည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဂိမ်းထဲသို့ဝင်သောအခါအထူးသဖြင့်မတရားမေထုန်ကိုသတိမပြုပါ။ ငါ Blutu သို့ရောက်လျှင် ps3 Controller နှင့်မထည့်နိုင်သောကုဒ်တစ်ခုကိုတောင်းသည်။ မင်္ဂလာပါ။
OS X El Capitan ၏ပဉ္စမ beta သည် Windows 10 ကို BootCamp နှင့်အတူဟောင်ကောင်ရှိ Apple Store ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခြားမည်ကဲ့သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
ပေးသူများသည် ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောတစ်လကို Apple Watch ၂ သန်းထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ